Ma ogtahay magaalada ay ku nool yihiin maalqabeennada ugu badan caalamka ee 2019? | Goojacade
Home War Ma ogtahay magaalada ay ku nool yihiin maalqabeennada ugu badan caalamka ee...
Magaalada London ayaa noqotay hoyga maalqabeennada ugu badan caalamka, sida lagu sheegay wargeyska Sunday Times ee UK kasoo baxa, kaasoo sanad kasta shaaciya liiska dadka maalqabeenka ah.
Laba nin oo walaalo ah oo lagu kala magacaabo Sri iyo Gopi Hinduja ayaa sanadkii saddexaad noqday kuwa ugu taajirsan UK, waxaana raggaasi Hindida ah maalkooda lagu qiyaasay ku dhawaad 30 bilyan oo dollar.
Raggaasi oo ganacsigooda uu 1914 kasoo bilowday Mumbai ayaa waxa ay leeyihiin shirkado ka shaqeeya shidaalka, gaaska, bangiyada, tiknoolajiyadda iyo hantida maguurtada ah.
Waxaa kaalinta labaad ku jira laba nin oo kale oo walaalo ah oo lagu magacaabo David iyo Simon Reuben, kuwaasoo lacag badan ka sameeyay guryaha, iibinta roogga iyo birta. Waxa ay leeyihiin maal ka badan 24 bilyan oo dollar.
Liiska ayaa waxaa ku qoran kunka qof ee ugu maalka badan UK, waxaana lagu saleeyay hantida muuqata iyo saamiyada ay leeyihiin.
Valerie Moran oo ku dhalatay Zimbabwe ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee kamid noqotay liiska maalqabeennada UK.
Jeff Bezos waxaa loo aqoonsaday qofka ugu taajirsan guud ahaan dunida
Lamaanahan ayaa warka ku saabsan furriinkooda ugu dhawaaqay bayaan ay si wada jir ah u soo dhigeen barta Twiter-ka.
Lamaanahan ayaa is guursaday sannadkii 1993-kii
Previous articleProfesooradu Xildhibaan Dhakool way galaafteen ee Oday Cadami maka badbaadi doonaa?